अष्ट्रेलियाका नेपाली सञ्चारकर्मी टीका कार्कीको असामयिक निधन « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलियामा विगत दुई दशकदेखि सक्रिय सञ्चारकर्मी टीका कार्की शनिबार मृत फेला परेका छन् । उनी हिमालयन रेडियोका सञ्चालक थिए । सन् २००३ देखि नेपाली भाषाको कार्यक्रममार्फत हिमालयन रेडियोले यहाँको समूदायलाई सुसूचित गर्दै आएको थियो । नजिकका आफन्तहरुले निरन्तर सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि उनलाई डलविच हिलस्थित निवासमा खोज्दा अचेत अवस्थामा फेला पारेका थिए । एक्लै बस्दै आएका उनलाई सुतेकै अवस्थामा हृदयघात भएको आशंका गरिएको छ । प्रहरीले कार्कीको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि पठाएको छ ।
हाल उनको शव लिडकम्बस्थित शवगृहमा राखिएको छ ।
यसैबीच, अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको संस्था अष्ट्रेलियन नेप्लीज जर्नलिष्ट एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले स्व. कार्कीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एक मिनेट मौन धारणा गरेको छ ।
आफ्ना सदस्यको निधनपछि बोलाइएको बैठकले शोकसन्तप्त परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेको छ । साथै बैठकले स्व. टीका कार्कीको योगदान अष्ट्रेलियाको नेपाली समूदायमा सदैव स्मरणीय रहने जनाएको छ । एन्जाका अध्यक्ष हेमन्त काफ्लेले कार्कीको निधनले अष्ट्रेलियाका नेपाली सञ्चारकर्मीहरु आहत बनेको बताए ।